Baska Iskiis ah ee Karsan wuxuu u adeegi doonaa Romania! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaBaska Iskiis ah ee Karsan wuxuu u adeegi doonaa Romania!
22 / 05 / 2020 16 Bursa, 40 Romania, YURUB, DUNIDA, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
baska iskiis u shaqeysta wuxuu ku adeegi doonaa romania
Karsan wuxuu soo saaraa gaadiidka dadweynaha ee korontada ku shaqeeya ee Turkiga waxaana loo dhoofiyaa adduunka, wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo sidii uu ku heli lahaa astaamo wadis madax-bannaan oo Koronto uu ku dhawaaqay in Weerarkii Iskiis u dhacay, uu helay amarkii ugu horreeyay. BSCI, oo ka mid ah shirkadaha tikniyoolajiyada hogaamisa ee Romania, ayaa amartay in mid Kamid ah Atak Electric loo isticmaalo gudaha Beerta warshadaha ee Ploeşti. Otonom Atak Electric, oo bixin doonta adeeg tijaabo ah aag cayiman, ayaa loo dhiibi doonaa BSCI dhamaadka sanadka. Karsan, oo ku guuleystey olole badan oo muhiim ah xagga teknolojiyadda, wuxuu garowsan doonaa mashruucii ugu horreeyay ee iskiis u iibinta Yurub ee fasalka 8 mitir ah iyo gaarsiinta Romania.
In kabadan 50 sano warshadaha gawaarida ee shirkadda Karsan ee Turkiga waxay ku yaalliin hal meel oo madax-bannaan oo soo saare gawaarida alaabada badan leh, sidoo kale waa shirkad Turki ah oo ay leedahay ADASTEC CORP. Iyada oo laga duulayo iskaashiga ay la leedahay shirkadda Atak Electric, waxay heshay amarkii ugu horreeyay muddo gaaban gudaheed nooca Atak Electric, halkaas oo ay ka biloowday ka shaqeynta wadis-darada "Level-4". BSCI, oo ka mid ah shirkadaha tikniyoolajiyada hogaamisa ee Romania, ayaa amartay in mid kamida Atak Electric in lagu isticmaalo gudaha Beerta warshadaha ee Ploeşti, wadanka. Marka la eego baaxadda mashruucan, Otonom Atak Electric, oo bixin doonta adeeg tijaabo ah aag cayiman oo ku dhex yaal Beerta Wershadaha, ayaa loo gudbin doonaa BSCI illaa dhamaadka sanadka.
“Amarkii ugu horeeyey ee Otonom Atak Electric ilaa Yurub”
In kasta oo nooca noocan cusub ee coronavirus (Covid-19) uu saameeyay adduunka, madaxa fulinta Karsan Okan Baş wuxuu yiri, “Atak Electric Atak, halkaasoo aan higsaneyno inaan ku soo qaadanno astaamaha darawalnimada-4 madax-bannaan, Amarkayaga waxaan ka qaadnay BSCI, mid ka mid shirkadaha shirkadaha teknolojiyadda muhiimka ah ee Romania. Amarkan wuxuu xoojinayaa aaminsanaanta mashruuca. Atak Automatous Atak Electric, tusaalaha loo dhammeyn doono bisha Agoosto, ayaa noqon doonta baska ugu horreeya ee korantada leh oo leh astaamo waditaan madax-bannaan oo ku habboon xaaladaha wadooyinka ee dhabta ah. Intaa waxaa sii dheer, amarkan, oo aan qorsheyneyno in aan gaarsiino dhamaadka sanadka, waxaan ku iibineynaa mashruuca ugu horreeya iskiis u madax bannaan ee Yurub fasalka 8 mitir. In kasta oo aan sii wadno shaqadeena annaga oo aan hoos u dhigin hannaankeenna guuritaanka ee xallinta safarka waarta, waxaan rajeynayaa inaan ka badbaadi doonno cudurka faafa ee adduunka sida ugu dhakhsaha badan u suurtageliya oo aan ula soo noqonno maalmo caafimaad leh. ” ayaa yidhi.
Heerka-4 Madaxbannaan ayaa la Dhexgelin doonaa
Mashruuca lagu xaqiijinayo kooxda Karsan ee R&D, Atak Electric waxaa lagu qalabeyn doonaa astaamo wadis-madax-bannaan. Mashruucu wuxuu ku socdaa, shirkadda Turkiga ee ADASTEC CORP, oo fulisa daraasado ku saabsan baabuurta iskood u taagan. Iyada oo la kaashaneysa Karsan, waxay qorsheyneysaa inay dhameystirto gawaadhi nooca hore ee iskood u taagan ee Atak Electric bishii Agoosto. ADASTEC CORP. Tijaabada, tijaabinta iyo tijaabinta Atak Electric waxay socon doontaa ilaa dhamaadka sanadka iyadoo la isku keenayo softiweerka 'Level-4 Automatous software' oo ay soo saartey Atak Electric qaab dhismeedka korontada iyo korantada gawaarida korantada.
Gawaarida Atak Korantada
TÜDEMSAŞ waxay sii wadi doontaa horumarinta dhismaha iyadoo la adeegsanayo alaabada iyo adeegga adeegga
Adeegga tareenada dheeraadka ah ee 124 ee magaalada Moscow
Dadka naafada ah waxay u adeegi doonaan Meelaha Madaarka